एग्राग्राफ : यो ध्यान नदिने कुनै समस्या पनि सानो हुन सक्छ। यसको लागि लिइने छैन कुनै पनि समस्या हुन सक्छ ...
विगतका लेखहरूमा, हामीले कपाल धोएर वा तिनीहरूको हेरचाह गर्ने तरिकाहरूको बारेमा कुरा गरौं। यसको अतिरिक्त, हामीले अवयवहरू लाई बुझ्न खोजेका थियौ जुन आधुनिक उत्पादनमा प्रस्तुत गरिएको छ, शैम्पोमा फोकस गर्ने। आज हामी उपयोगी bioadditives को बारे मा कुरा गर्नेछ - हेरविचार को लागि आधुनिक उत्पादन को मुख्य सार। कुराकानी लामो हुनेछ र अझ धेरै पनि बोरिंग पनि हुनेछ, तर यस्ता लेखहरू पछि तपाईं रचना द्वारा शैम्पो बुझ्न र विज्ञापन नाराहरू पढ्न सक्षम हुनेछ।
आधुनिक शैंपो साधारण स्वच्छता को एक माध्यम हो र एक शक्तिशाली "जटिल" हो जो बाल र खोप को प्रभावित गर्दछ। सामान्यतया "सफा" र "हटाउने" को अतिरिक्त, तिनीहरू "प्रभावकारी रूपमा खोपलाई प्रभाव पार्ने" को सामना गर्छन् र कहिलेकाहीँ "उपचार" र "पुनर्स्थापित" जुन, यो अब कणिकल सतहमा मात्र काम गर्दैन, तर "गहिरो तहहरूमा प्रवेश बाल "," क्षतिपूर्ति "वा बाल (केरिटिन र सिस्टिन) को प्रोटीन संरचनाको हराएको भागहरू पनि" प्रोस्टेटाइजिङ "पनि हो, जुन पहिले नै एक सजिलो कार्य हो।
वास्तवमा, "शैम्पू" को विषयमा आफैंलाई मात्र संकुचित नगर्नुहोस्, किनभने वास्तवमा, "क" र "कुन स्वरूपमा" पूरै पेश भएको कुनै फरक फरक छैन - यसको प्रभावको सिद्धान्त वास्तवमा परिवर्तन गर्दैन, किनभने प्रकृति परिवर्तन हुन सक्दैन।
अन्तिम लेखमा, हामी सबै कार्यात्मक additives को भूमिका र संरचना को जांच र हामी केवल "उपयोगी पूरक" छोडे। एक साधारण कपाल र केवल लामो दूरीको लागि (अन्तिममा, यो भन्न सकिन्छ, जीवन सम्भव छ) रसायन शास्त्रको मालिक सम्भव छैन। वास्तवमा, हामी केवल "आधारभूत" वा "प्रायः" प्रसोधनमा मात्र विचार गर्नेछौं।
प्रोटीन (प्रोटीन, polypeptides)
प्रोटीन उच्च आणविक कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो, जुन कुनै पनि जीवित जीव को सबै भन्दा महत्वपूर्ण भाग हो। जीवित जीवहरुमा, प्रोटीन को अमीनो एसिड संरचना आनुवंशिक कोड द्वारा निर्धारित हुन्छ, प्राकृतिक (अर्थात प्राकृतिक संश्लेषण) संग, ज्यादातर मामलों में 20 मानक एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य में यह माना जाता है कि प्रोटीन अणुओं में 100 से 10,000 अमीनो एसिड के होते हैं। प्रोटीनले पानीमा फरक फरक पार्छ र यो एकअर्काबाट फरक हुन्छ (पानीमा अधिकांश प्रोटीन भंग गर्दछ)। अघुलनशील प्रोटीनहरू, उदाहरणका लागि, केरिनटिन (कपाल, स्तनको कपाल, पक्षीहरूको पंख आदि) र फाइब्रोइन (रेशम र कोबेबको भाग हो) ... रासायनिक रचनाले, प्रोटीनहरू विभाजन गरिएका छन्: सरल - तिनीहरू एम्नो एसिड अवशिष्ट र जटिल हुन्छन् - अन्त्यो भए पनि अमीनो एसिडहरू थप हुन सक्छन् कुनै पनि जडानहरू। यदि यी धातुहरू छन् भने, त्यस्ता प्रोटीनहरू मेलालोप्रोटेइड्स भनिन्छ, यदि कार्बोहाइड्रेट ग्लियोकोपोटिन भनिन्छ भने, यदि वसा, त्यसपछि लिपोप्राइटिन, यदि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिओप्राइटिन हुन् भने। उनीहरूको प्रकार्यको अनुसार, प्रोटीनहरू विभाजित हुन्छन्: संरचनात्मक - एक प्रकारको प्रवद्र्धन, जसले कोशिकाहरू र धेरै जीवनीहरू आकार दिन्छ। कोलेजन र एलास्टिन कनेक्टिविटी ऊतक को इन्सेसेलुलर पदार्थ को मुख्य घटक (उदाहरणका लागि, कार्टिलाइज), र किटिनको अन्य संरचनात्मक प्रोटीनबाट त्यहाँ कपाल, नाखून, पक्षीहरूको पंख र केही गोलाहरू छन्; Catalytic - आवश्यक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्नुहोस्; ट्राफिक - सेल को भित्र र बाहिर को हस्तांतरण ले बाहिर; सुरक्षात्मक - मानव प्रतिरक्षा प्रणाली संग सम्बन्धित; हार्मोनहरू - धेरै महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरूको विनियमन प्रदान गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, वृद्धि, भित्ता, आदि)। अणुहरु को संरचना द्वारा, प्रोटीन मा विभाजित छ: फाइब्रिलार - उनिसँग अणुहरु को एक रैखिक ढाँचा छ जुन फाइबर को रूप मा (उदाहरण को लागि, कोर्टेक्स को बाल, मांसपेशी, छाला, आदि)। तिनीहरू तेश्रो पदार्थ हुन्, प्रायः पानी र नुन समाधानमा अघुलनशील हुन्छन्। प्लास्टिकता, लोच र अविश्वसनीय स्थायित्व संग ऊतक प्रदान गर्नुहोस्; ग्लोबुलर अणुहरू एक बल = विश्वव्यापी (लगभग सबै ज्ञात एंजाइमहरू, एंटीबॉडी, केहि हार्मोनहरू मा राख्छन्) मा हुन्छन्।
हेरविचार उत्पादनहरूमा प्रोटीनहरू प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरू
तपाईं लामो समयको लागि प्रोटीन बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर म डराउँछु कि माथिको लागि तपाइँलाई विशेष गरी रोचक वा बुझ्न योग्य छैन। यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि गुण र प्रकार्यको विस्तृत दायरा र प्रकार्यको बावजुद, छाला हेरचाह र बाल हेरचाह रचनाहरूमा प्रोटीन प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरू सीमित हुन्छन् किनभने तिनीहरूका आकारहरू: तिनीहरू धेरै ठूला अणुहरू छन्, र तिनीहरू आफैंबाट असुरक्षित हुन सक्दैनन्। छाला। यसबाहेक, त्यहाँ अध्ययनहरू छन् जुन प्रतिरक्षा प्रणालीले विदेशी प्रोटीनको उपस्थितिमा अत्यन्तै दृढतापूर्वक प्रतिक्रिया गर्दछ भन्ने सुझाव दिन्छ, सूजन र एलर्जी प्रतिक्रियाहरू (ध्यान दिनुहोस्! तपाईंको समस्याको सार छ!)। तथापि, आधुनिक कस्मेमेटिकले प्रोटीनहरू प्रयोग गरी सक्रिय रूपमा विशेष गरी जनावरको उत्पत्ति प्रयोग गर्दछ जुन यसले छालाको आवेदनलाई पनि प्रभाव पार्छ (सबैभन्दा लोकप्रिय क्षतिपूर्ति प्रोटीनहरू कोलागेन, एस्टिस्टिन, केरिटिन र विभिन्न एन्टीएक्सिडेंटहरू छन्)। अब सब्जी मूल (प्रोम, सोया - धेरै लोकप्रियका प्रोटीनहरु लाई विशेष ध्यान दिईन्छ र तपाईले "फैशनेबल", गेहूं, जाम, बादाम आदि) र मानव शरीर (समुद्री कोलेजन, चिटोसन) मा फेला परेका समुद्री समुद्री प्रोटीनहरू भन्न सक्नुहुन्छ। कपाल को हेरविचार उत्पादन र खोपडी मा प्रोटीन को मुख्य उपयोगी गुणहरु : 1. छाला को राम्रो अवशोषण; 2. कपालको सिङ्गोमा छालाको सीङ्ग तहहरू मार्फत प्रवेशको सम्भावना; 3. फिल्म निर्माण को प्रभाव र बाह्य वातावरण को आक्रामकता को बिरुद्ध संरक्षण को निर्माण; 4. शैम्पो र बाल्ममा सर्फैक्टेंटहरूबाट जलनको कमी; 5. कपालको सुँगुरको प्रतिबन्ध; 6. कपाल र खोपडीको लोच र plasticity को सुधार; 7. कपालको चमक बढाउनुहोस्।
हाइड्रोलाइजेट्स एक प्राकृतिक रूप मा, प्रोटीनहरु लाई निष्पक्ष गरीब देखि घुलनशील हुन्छन्, जसको मतलब यो प्रसाधन सामाग्री मा उपयोग को लागि उपयुक्त छैन। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूको विशाल आकारको बारेमा नबिर्सनुहोस्, यो यस कारणको लागि हो कि प्रोटीन (कुनै पनि मूलको) हाइड्रोलाइट्स मा परिवर्तित हुन्छ।
पानी, तापमान र विशेष एंजाइमहरूको प्रभाव अन्तर्गत, लामो प्रोटीन अणुहरू सरल मा विभाजित हुन्छन्, त्यो आकारमा सानो छ। रसायन विज्ञान मा यी विधिहरु लाई एसिड र एंजाइमिक हाइड्रोलीसिस भनिन्छ। हाइड्रोलीज उत्पादहरू - हाइड्रोलाइट्स - जैवजीयिक सक्रिय हुन्छन्, तर तिनीहरूसँग उच्च-ग्रेड प्रोटीनको एलर्जी र चिन्ताजनक प्रभाव छैन। प्रायः, हाइड्रोलाइट्स को cations को विशेषताहरु संग अनुमोदित गरिन्छ, यो "+" चार्ज कणों को छ, जो उनको बाल को उच्चता क्षमता (सब्सिड) को प्रदर्शन को अनुमति दि्छ। यो, यो घटक सरल हाइड्रोलाइट्स को भन्दा राम्रो3गुना बालमा विज्ञापन गरिएको छ, जसको अर्थ उनीहरूले "लामो समयसम्म" प्रभाव बोलाउन धेरै फैशनेबल प्रदान गर्दछ, जुन "लामो-स्थायी" प्रभाव हो।
हाइड्रोलाइज्ड केरिनन - ऊन, ह्वाइट र पशुहरूको सींगबाट हाइड्रोलीसिस द्वारा प्राप्त गरिन्छ र छाला र कपाललाई सबैभन्दा ठूलो पहिचान देखाउँदछ। यो अमीनो एसिड को मिश्रण हो, जसको केहि सल्फर, सिलिकिक एसिड र जस्तै हुन्छ। आजसम्म, रसायनज्ञहरू उनीहरूलाई मात्र बाल हेरविचार उत्पादनहरूमा परिचय दिन सिकेका छन् तर स्टाइलमा समेत! कणिकलको रूपमा कपालको हराएका भागहरू (यसलाई इस्त्री गर्ने) र कपालको गहिरो तहमा प्रोटोजिरुसेट गर्नुहोस्। कपाल बलियो बनाउँछ र उनीहरूको विकासलाई उत्प्रेरित गर्छ।
कोलागेन हाइड्रोलिजेट - छाला, कार्टिलाज र टेलन्सको पाङ्ग्राबाट प्राप्त, एक जटिल जटिल अमीनो एसिड संरचना (16 मुख्य अमीनो एसिड99 छन्)। यसले कपाल र खोपडीको अत्यन्त बलियो चिसोपनलाई बढाउँछ, पुनरुत्थान र छालामा अमीनो एसिडको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्दछ, एक पोषण र घाउ उपचार उपचार प्रदान गर्दछ। प्रभावकारी रूपमा बाल भित्र आवाजहरू भरेर, तिनीहरूलाई नेत्रहीन बनाउँछ र कचौरा मोटो र डेंसर। पतली, बेकारीका लागि आदर्श भराउने, बालोंको हानिको शिकार। प्रायः "भोल्युमको लागि" कोषमा पेश गरियो र सेलुलोजसँग संयोजन एकदम निरंतर र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एक प्रभावशाली प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
Elastin हाइड्रोलिज्ज - अधिक प्रायः ठूलो सींग जनावरहरूको कनेक्टिविटी ऊतकबाट प्राप्त हुन्छ। यो छालाले राम्रोसँग अवशोषित गर्दछ र नमी बनाए राख्ने क्षमता छ, छालाको ऊतकको लोचलाई बहाल गर्दछ र विभिन्न प्रयोजनका लागि खोप लाग्ने हेरविचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
गेहूं ग्लुटेन हाइड्रोलिजेट - बाइन्ड फ्री-एसए समूहहरू (जो क्षतिग्रस्त बालोंका संकेतकहरू हुन्), जुन वास्तवमा खोएको रासायनिक ब्यान्ड भित्र र कपालको सतहमा बहाल गर्न सकिन्छ। ठूलो मात्रा मा ग्लुटेमिक अम्ल हुन्छ , जो एक साथ अन्य अमीनो एसिड संग पोषण र क्षतिग्रस्त बालहरुको संरक्षण प्रदान गर्दछ। यसको छाला र कपालमा नमीशराइजिंग प्रभाव छ, सतहमा सुरक्षात्मक फिल्म बनाइन्छ। राम्रो तरिकाले कपाल प्रभावित गर्दछ, उनीहरूको चमकलाई पुनर्स्थापना र लोच सुधार। छाला हेरचाह उत्पादनहरूमा, यो सक्रिय रूपमा मुक्त कणको प्रभावलाई बेवास्ता गर्छ, भिटामिन ई को लागी धन्यवाद, जो उमेर-सम्बन्धित बालहरुको लागि लाइनहरु मा विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
दूध हाइड्रोलाइजेट - एक बालबालिकाको संरचना बहाल गर्न अविश्वसनीय उच्च क्षमता हो, ग्लुटिआइन, एस्सारिक र लिस्न जस्ता अमीनो एसिडको लागि धन्यवाद। यसलाई प्रभावकारी मास्टराइजरको रूपमा क्यान्सर, इम्युसन र शैम्पोमा सिफारिस गरिन्छ। कैसिइन, जो संरचना को भाग पनि उत्तेजना हटाउन को क्षमता छ र यसैले संवेदनशील र संक्रमित छाला को लागि अक्सर सूत्रहरुमा पेश गरिन्छ।
सोया हाइड्रोलिजेट --सँग ग्लुटेमिक र एस्सारिक एसिडको उच्च सामग्री छ। दुवै एसिड पुनर्स्थापित सिस्टिन र सिस्टिनिन पुलहरू, जसको अर्थमा उनीहरूले फोब्रिलार प्रोटीनहरू पुनरुत्थान गर्ने क्षमता छ, भित्री गहिराइहरूमा पनि। स्थिर बिजुलीको कपालबाट रमाईलो हुन्छ र गीला र सुत्ने कपाल दुवैलाई जोड दिन्छ। नमीको हानिबाट छाला र कपाल को सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस् तापनि तापमानमा थोरै महत्वपूर्ण वृद्धि (थर्मल प्रभाव)।
खैरो हाइड्रोलिजेट - अमीनो एसिडका अलावा धेरै मात्रामा भिटामिनहरू हुन्छन्, विशेष गरी समूह बी र एंजाइमहरू। खोप लाग्ने शक्तिशाली र आत्मविश्वास पोषण प्रदान गर्दछ, यसको पुनरुत्थान बढ्दै जान्छ।
Chitosan हाइड्रोलिक्स एक अनोखा इमारत सामाग्री हो जुन अमीनो एसिड र समुद्र को गहराई मा रहन माल्लक्स को गोले देखि व्युत्पन्न न्यूक्लियोप्रोटेन्टीज वाला सामाग्री हो। गहिरो कपाल प्रोस्टेटिक्सको लागि लामो समयसम्म प्रभावकारी प्रभाव छ र विभाजित अन्त र भित्रीपनको गठन रोक्छ। राम्रो कपाल को मात्रा मा प्राकृतिक वृद्धि को बढावा गर्दछ, कपाल को बल बढ्छ, बाल को प्रतिरोध को विभिन्न रासायनिक उपचार को बढ्छ। पुनर्स्थापित गर्दछ र cuticle सुचारू गर्दछ। पुनर्जन्म र विटामिन र नमी को इष्टतम संतुलन को बरकरार राख्छ, एंटीिमिकबियल गुण छ।
अमीनो एसिड, जस्तै हामीले पहिले नै व्याख्या गरेका थियौ, प्रोटीन को रूप मा, पोप्पिप्पाइड बांड को मदद संग एक-दूसरे संग जोड दिए। आधुनिक विन्दुको अनुसार, नियामक पेप्टाइड्सको सहयोगमा , व्यक्तिगत कक्ष र सम्पूर्ण अङ्गहरू एक-अर्कासँग कुराकानी गर्छन्। धेरै हार्मोनहरू (इन्सुलिन, सोटोट्रोपिन, endorphin) पेप्टाइडहरू छन्। तिनीहरूले हाम्रो दिमागमा काम गर्छन्, हाम्रो स्वास्थ्यको प्रभावलाई प्रभाव पार्छ, प्रतिरक्षा कक्षका गतिविधिको स्तर विनियमित गर्दछ। संक्रामक प्रक्रियाहरु को विकास र उन्मूलन लाई प्रभावित गर्दछ, रोगजन्य जीव र विषाक्त पदार्थों को रक्षा। यो कारण यो हो कि पेप्टाइड्स अक्सर ब्याक्टेरिया (तेल छाला को हेरविचार उत्पादनहरुमा) को लागी डिजाइन गरिएको औषधिहरुमा प्रयोग गरिन्छ, कवक (डण्ड्रफ उपचार मा) र छाला को सूजन (संवेदनशील छाला को माध्यम मा)। पेप्टाइड्स कमजोर र क्षतिग्रस्त कपालको अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। बालों मा विशेष रूप देखि शक्तिशाली विशिष्ट पेप्टाइडाइड ग्लाइसेन , वाइन र लिस्न हो ।
तिनीहरूले खोप र कपालको काममा ठूलो भूमिका खेल्छन्। खसीदार ग्रंथहरु कपाल को कपाल को मुख मा खुलती छ, र मोटी दुवै बाल शाफ्ट मा हुन्छ, एक सुरक्षात्मक फैटी लेयर (तथाकथित फैटी एसिड लेयर) र खोप मा। वास्तवमा, शैम्पूको प्रकार्य भनेको न केवल ग्याँस हटाउनु, तर बोसो पनि। तथापि, सबै वोसो को हटाउन न केवल खोपडी को अत्यधिक सुई को असुविधा को लागी, तर छाला को सुरक्षात्मक गतिविधि को पनि नुकसान । यसको अतिरिक्त, यो लामो समय सम्म सबैलाई थाहा छ कि शैंपू परिणामहरु को द्वारा यो बढि अधिक उत्थान मा फैट को एक मजबूत, लगभग कुल हटाईयो। यसैले, लिपिड लेयर पुनर्स्थापना गर्न, स्वस्थ छालाको लागि स्वाभाविक, संशोधित वस को परिचय - फैटी एसिड र तेल को अनुमान। दुर्भाग्यवश, प्राकृतिक सब्जीको तेल र पशु वसाले धेरै पटक ओभरलोड गरे - तिनीहरूले छाला र कपाललाई टाढा राख्छन्।
चम्मचले छालाको साथ दुई तरिकामा अन्तरक्रिया गर्न सक्छ: या त छालाको सतह माथि फैलिएको छ, यसलाई नरम बनाउनुहोस् र मखमली तिनीहरूको परम्परागत कार्य हो। वा एपिडर्मिसको गहराईमा घुसाउनुहोस् र पहिले नै जैविक रूपले सक्रिय पदार्थको रूपमा कार्य गर्नुहोस्।
सिरेमाइड = sphingolipids एक साथ फाइबर एसिड र कोलेस्ट्रॉल संग, सिरेम्याड स्ट्रैटम कोणु को लिपिड म्यान को आधार हो। कपाल र छालामा, सिरामिडहरू इन्टरसेलुलर स्पेस भर्नुहुन्छ, एक किसिमको सिमेन्टिंग पदार्थ केराटीन सेलहरू जस्तो देखिन्छ। शैम्पो र बाल्मको रचनामा सिरेमाइडको परिचय बालको संरचनामा सुधार गर्छ, विशेष गरी दाँत, रासायनिक लहर, इन्सुलेशन पछि।
लानोलिलिन - भेडाको ऊनसँग भेडा भयो, भेडा र पसीरको चराहरू भेडाहरू द्वारा उत्पादित। राम्रो देखिने छाला, छाती सफा गर्छ, र यसैले सुचारु को हेरचाहको लागि सिफारिश गरिएको छ, छालामा जलन को प्रलोभनमा। एक बलियो नरम प्रभाव छ, कपाल र छाला लोचदार र लोचमा राख्छ।
Cryolane = तरल lanolin (lanolin तेल) - lanolin को तुलना मा, यो सजिलै छाला र कपाल को गहिराई पर प्रवेश गर्दछ, चिपचिपापन र मोटाई को कुनै संवेदन छोडेर। अक्सर प्रायः धुरी र बच्चाहरूको कास्मेटिक्सको लागि, संवेदनशील छालाको लागि लाइनहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
Terlan = कठिन lanolin - लिनानोको तुलनामा कम पानी अवधारण क्षमता छ, तर यो कपाल र छालाको सतहमा डेंसर कोटिंग बनाउँछ। यो कपाल क्यान्सर र बाल्मको रचनामा प्रस्तुत गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका स्टाइल र कपाल लाइकर्समा सतहको फिल्म बनाउन विभिन्न lanolin डेरिभेटिभ (एसिटेटलटेड ल्यानोलिन) प्रयोग गरिन्छ।
Spermaceti एक प्रकार को मोम हो जो शुक्राणु व्हालय को एक विशेष गुहा मा निहित छ र यसलाई echolocation को लागि काम गर्दछ। यसको संरचनामा, स्पर्मेटिटी मानव छालाको चोसोमा भेटिएको मोमको नजिक छ, त्यसैले यो मानव छाला सम्भव छ र सम्भवतः कम मात्रामा एलर्जी प्रतिक्रियाहरू हुन्छ। शिकार शुक्राणु व्हालयहरूमा प्रतिबन्धको सम्बन्धमा यसको सिंथेटिक विकल्प प्रयोग गरिन्छ। Spermacetum को छाला मा एक पुनर्जन्म प्रभाव छ, एक्जिमा, न्यूरोडर्मेटाइटिस र रासायनिक जल को उपचार मा प्रभावकारी। यो संवेदनशील छाला को जलन को लागि प्रकोप को लागी तैयार गरिएको छ।
पशुपक्षीहरूको मोटो ऊतकको ताप्लेट द्वारा वसा अनियमित हुन्छ । यो अद्वितीय छ कि यो कपाल र छाला ओले, पाल्टिमिटिक, स्टिरिक, लिनोलेक र ल्यानोलिन एसिड, साथै साथ भिटामिन एफ को लोचको लागि अविश्वसनीय रूपमा महत्वपूर्ण छ । यो कपाल र कपालको कपाललाई बलियो बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। कोलागेनको उत्पादनको माध्यमबाट बाल विकासलाई प्रोत्साहन गर्दछ (अपर्याप्त उत्पादन जसको कपाल र बाल जडहरूको विनाश हुन्छ)। लिओलेइक र लिनोलिनिक एसिडहरू सेलुलर ऊतक बनाउन तत्वहरूको संश्लेषणका लागि आवश्यक छन्।
अण्डा तेल - अण्डा जिरोबाट निकालिन्छ। यो तेल फोसफोलिपिडको अमीर स्रोत हो र मोटो-घुलनशील भिटामिन ए, ई, डी। रिजर्भेसन लाइनहरू, सुखाको छाला र कपालको उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ।
बिरुवाबाट उत्पन्न बोसो भनिन्छ तेल। कोठा तापमान मा सबै भन्दा तेल कोका घिउ, पाम, नरिवल र Shea घिउ बाहेक तरल छन्। दुर्भाग्यवश एकदम बाह्य वातावरण (गर्मी, सूक्ष्मजीवहरु) प्रयोगको लागि केही समस्या सिर्जना गर्ने परिवर्तनको संवेदनशील तेल। किनभने एकदम गम्भीर परिरक्षकों वा एंटीओक्सिडेंट थप्न आवश्यकता को, तरकारी तेल अक्सर एलर्जी कारण।
पुरातन समयका सबैभन्दा सक्रिय cosmetology सबै शाखा प्रयोग किनकी यो तेल छ किनभने तेल बारेमा हामी एक लामो समय को लागि, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि पर्याप्त छैन। र यो म मात्र फैटी एसिड बाहेक (वास्तवमा, यो छ - तेल) भनेर भन्न सकिन्छ विभिन्न प्रकारका (संतृप्त र असंतृप्त) को, तिनीहरूले waxes, phytosterols, phospholipids र अन्य पदार्थ तिनीबारे राम्रो छाला र कपाल प्रभावित समावेश .. तर खुलस्त, मान कम, एक कस्मेटिक संघटक रूपमा, हदसम्म यो बोसो घुलनशील भिटामिन समावेश सूची निर्धारण गरिन्छ छ।
तेल - सबै भन्दा प्राचीन खाना र कस्मेटिक उत्पादनहरु बीच। विशाल tocopherol सामग्री परिभाषित विशेष मान, शक्तिशाली एंटीओक्सिडेंट र मइस्चराइजिंग गुण छ।
सूर्यमुखी तेल - सूरजमुखी बीउ को अहम वा निकासी को एक उत्पादन। यो मइस्चराइजिंग र emollient गुण छ। वसामय ग्रंथिहरु को समारोह को normalization लागि छाला हेरविचार प्रयोग औषध र बाल उत्पादनहरु मा सामान्य पीएच पुनर्स्थापना - दुवै plonkoobrazovatel वातावरण को आक्रमण र कमजोर यूवी फिल्टर विरुद्ध सुरक्षा।
लेसितिण (हामी सामान्यतया अन्डा yolks संगत जो) - सूर्यमुखी एक धेरै मजबूत र नाजुक प्राकृतिक पायसीकारकों फेंकना। यो छ कि सेल झिल्ली को आधारभूत भवन ब्लक (र सबै भन्दा जीवित जीव मा) व्यक्ति लागि महत्त्वपूर्ण छ। आफै लेसितिण उत्तेजक पुनर्जनन, घाउ निको र keratin कक्षहरूको प्रतिरक्षा बढाने गतिविधि गरेर छाला मा एकदम शानदार emollient प्रभाव छ। एक विशेष भिटामिन ए, ई, बी 1, B6, पीपी संग संयोजन प्रभावकारी। अक्सर, शुष्क संवेदनशील र सजिलै रिसले छाला को हेरविचार को लागि उत्पादन शुरू, साथै धेरै, धेरै सुक्खा कपाल लागि।
Jojoba तेल - एक सदाबहार shrub jojoba र खुलस्त प्राप्त। बरु तरल मोम - रसायन को दृष्टिकोण देखि साधारण तेल छ। यो रोचक, यो सम्पत्ति, तेल / jojoba मोम धेरै कृतज्ञ भई स्वीकार मानव छाला धन्यवाद छ, किनभने dermal बोसो व्यक्ति माथि waxes को कारण% बारेमा 25, को jojoba तेल संरचना त्यस्तै छ! छाला सामाग्री मा sebum सङ्गत, यो wilts सजिलै छाला गरेको सुरक्षा बाधा, एकदम पानी हानि कम मार्फत - छाला, यो थप लोचदार र जवान बनाउन hydrates। ग्याँसहरु र पानी वाष्प को वाष्पीकरण ढिलाइ गर्दैन नै - छ, सेल साँस interfering बिना semipermeable बाधा तह सिर्जना! प्रभावकारी, केश cuticle चौरसाई यसलाई नरम र चमकदार बनाउने काम गर्दछ। यो बेला संवेदनशील छाला र कपाल हानि झुकाउ काम विशेष गरी मूल्यवान छ खोपडी, को नाजुक सफाई योगदान पुग्छ। बाल follicles वृद्धि र विकास Normalizes।
गेहूं तेल - भ्रूण durum गहुँ गुच्छे अन्न पीठो को प्रक्रिया पछि बर्बाद मा बाँकी देखि तयार पारे। भिटामिन ई, एफ र समूह बी, खनिज लवण, प्रोटीन, मा धनी तत्व फलाम, जस्ता, पोटासियम, सल्फर, फस्फोरस, linoleic, linolenic र पहिल्याउन oleic एसिड। गेहूं तेल सबै ज्ञात तरकारी तेल देखि भिटामिन ई को अधिकतम रकम समावेश गर्दछ। यो जडान, यो tocopherol सबैभन्दा सक्रिय फारामहरू प्रभुत्व छ। भिटामिन धनी तेल संरचना कस्मेटिक तेल मा व्यापक प्रयोग कारण। यसलाई आफ्नो ताजगी कायम रहन्छ, जगेर्ना र छाला लोच को बहाली गर्न योगदान बाल बलियो, को intracellular चयापचय normalizes। यसलाई साथै सुक्खा, बुढ्यौली टूट छाला लागि मिडिया मा, शुष्क भंगुर बाल लागि हालतमा को तैयार मा प्रयोग गरिन्छ। यो छाला flaking, खुजली, को epidermis को सामान्य पानी-लिपिड मेन्टल दुरुस्त र psoriasis, एक्जिमा, घामले डढाउने काम को लागि त्यसैले उपयोगी छ समाप्त। यो एक सुरक्षा फिलिम तिनीहरूलाई कवर द्वारा सौर विकिरण देखि कपाल र छाला सुरक्षित राख्दछ। यो बाल लचीलापन र चम्कने दिन्छ। तथापि, रोगाणु तेल राम्ररी एलर्जी झुकाउ मानिसहरूलाई लागू गर्नुपर्छ।
अङ्गुर बीउ तेल - सबैभन्दा पछिल्लो केही वर्ष सुशील, कस्मेटिक्स सबैभन्दा प्रभावकारी प्राकृतिक मइस्चराइजिंग थपिएको। यसलाई भिटामिन, लेसितिण, pectin, ग्लुकोज र पनि प्रोटीन को एक ठूलो रकम समावेश गर्दछ। बस रक्सी रूपमा, तेल bisphenol, जो धेरै प्रभावकारी एंटीओक्सिडेंट र मुक्त कण मानव शरीर को पहिले उमेर बढन कारण जो neutralize समावेश गर्दछ। यो निःशुल्क कट्टरपंथी प्रणालीबाट कक्षहरूको सुरक्षा, वृद्ध तिनीहरूलाई रोकन, कक्षहरू सुधारना गर्ने क्षमता दुरुस्त normalizes। तेल, सुख्खा छाला smoothes moisturizes र यो nourishes, जलन र संवेदनशील छाला को flaking विशेषता समाप्त। यो वसामय ग्रंथिहरु को गतिविधि normalizes किनभने अङ्गुर बीउ तेल, तेल छाला को लागि एक माध्यम मा शुरू गरिएको छ। पनि गहिरो तहहरू मइस्चराइजिंग, भोकमरी र क्षतिग्रस्त बाल दुरुस्त राखेको छ।
Shea मक्खन (वा Karite) - अफ्रिकी Shea को फल देखि व्युत्पन्न। तेल छाला मा कोलेजन को संश्लेषण बढावा, त्यसैले छाला वृद्ध र कपाल follicles बाल हानि गर्न पातलो र खतरा बलियो लागि धन को प्रयोग गर्नुहोस्। साथै, यो सक्रिय सूर्य जला देखि छाला र कपाल सुरक्षित राख्दछ। समकालीन स्टाइल मा उनि एक उच्चारण थर्मल प्रभाव रूपमा, बलियो हेरविचार संयोजन, शुरू।
नरिवल तेल - यो नरिवल पाम को फल को चोट मज्जा देखि उत्पादन गरिएको छ। तेल ओक्सीकरण गर्न नरिवल तेल अत्यन्तै स्थिर बनाउँछ जो 17% गर्न रकम अप, मा lauric, miramistinovuyu एसिड र caprylic र capric एसिड समावेश गर्दछ। कस्मेटिक्स, यो कमजोर र पातलो कपाल लागि शैंपू र कंडीशनर मा प्रयोग गरिन्छ।
कोको मक्खन - फल / सिमी सदाबहार ट्रपिकल कोको रूख देखि व्युत्पन्न। ठूलो परिमाणमा यसलाई lauric, Stearic, oleic र linoleic एसिड, साथै theobromine, कैफीन, चीनी, भिटामिन, एच, डी, पीपी र बी, तरकारी प्रोटीन र टेन्निसको समावेश गर्दछ। Emollient, निको र toning प्रभाव। तेल छाला झुकाउ लागि मइस्चराइजर रूपमा कपाल र कपाल follicles को बलियो लागि हालतमा मा शुरू गरिएको छ।
अलसी तेल - आहार phytosterols, linoleic र linolenic एसिड को अस्थिर र भारी मात्रा को स्रोत। यो पनि व्यक्ति को हर्मोन स्थिति ठीक गर्नु भनेर पदार्थ समावेश गर्छ, antitumor, एंटीओक्सिडेंट, जीवाणुरोधी, छाला मा antiviral र antifungal प्रभाव छ। तपाईं केहि थप्न आवश्यक छ?
अरंडी तेल - ताजा प्राप्त, बीउ अरंडी सेम को गोले मुक्त परिपक्व। सबैभन्दा सक्रिय यसलाई आफ्नो वृद्धि बढावा रूपमा, साथै, यो तिनीहरूलाई चम्कने र silkiness दिन्छ, कपाल को हेरविचार उत्पादन प्रयोग गरिएको। उनको वृद्धि प्रोत्साहित र कपाल follicles बलियो बनाउन, पातलो मा शैंपू रचनाहरूको बाल हानि झुकाउ समावेश।
मानव जीवनमा जैविक भूमिका: भिटामिन र स्वास्थ्य बीच सम्बन्ध लामो समय पहिले स्थापित। पनि प्राचीन ग्रीक चिकित्सकहरु (जस्तै Galen) जीवन सम्भव छैन आफ्नो लेखोटहरूमा भिटामिन बिना छ भन्ने तथ्यलाई लेखे। जीवन - र नाम "भिटामिन" ल्याटिन "Vita" भन्दा अन्य केही छ। निस्सन्देह, चिकित्सा ज्ञान को संस्थापक त व्यापक छ देखि, कि मनोवृत्ति भिटामिन को प्रयोग को संस्कृति परिवर्तन भयो। उदाहरणका लागि, यो पहिले तिनीहरूले मात्र तरिका यी "जीव रसायन प्रतिक्रिया को प्रमुख उत्प्रेरक" खाना लागि तिनीहरूलाई खाने गरिएको छ लागि क्षतिपूर्ति गर्न अर्थ जो छाला र कपाल, भित्र पस्नु सक्दैन लाग्यो थियो।
भिटामिन को कमी विभिन्न रोग (कहिले काँही अपरिवर्तनीय), जो अवस्था र छाला र कपाल को उपस्थिति असर पहिले उमेर बढन (विश्रामहरू तल कोलेजन keratin र आवश्यक एमिनो एसिड), सहित जान्छ। उत्पादनहरु छाला हेरविचार र बाल लागि भिटामिन अनिकालबाट लागि क्षतिपूर्ति गर्न, पुनर्जनन प्रक्रियाहरू अघि बढाउने, मुक्त कण र सूर्यका देखि छाला र कपाल सुरक्षा, साथै स्वस्थ कपाल को वृद्धि प्रोत्साहित, moisturize र खोपडी पोषण जो भिटामिन, विभिन्न थप्नुहोस्।
रासायनिक प्रकृति: भिटामिन - जो रासायनिक यौगिकहरु को कुनै एक वर्ग गर्न श्रेय गर्न सकिँदैन जैविक पदार्थ को एक विशेष किसिम। तिनीहरू फरक रासायनिक संरचना छ। विभिन्न सूत्रहरू, र यसैले विभिन्न गुणहरू। तिनीहरूले एउटा मात्र कुरा गरेर एकताबद्ध छन् - तिनीहरू पर्याप्त मात्रा मा मानव कक्षहरू मा संश्लेषित गर्न सकिँदैन, त्यसैले तिनीहरू आवश्यक बाहिरबाट इन्जेस्टेड हुनुपर्छ। कक्षहरू मानव मा आधुनिक अवधारणाहरु भिटामिन अनुसार, प्रोटिन जडान इन्जाइमहरु मा परिवर्तित छन्।
परंपरागत भिटामिन समूह विभाजित छन्, संभवतः भंग: घुलनशील (भिटामिन ए, ई, डी, एफ) र पानी घुलनशील (बी समूह भिटामिन भाग-2,5,6, भिटामिन सी, एच, पी, पीपी)। भिटामिन को बिरुवाहरु को प्राथमिक स्रोत हो (राम्रो हो जो प्राकृतिक भिटामिन, तर धेरै गरिबी शरीर द्वारा अवशोषित र भण्डारण छन्) तिनीहरूले रासायनिक वा माइक्रोबियल संश्लेषण गरेर उत्पादित गर्दै छन्, (कृत्रिम भिटामिन - बचत गर्नुहोस् र एकदम पूर्ण शरीर द्वारा अवशोषित)।
महत्वपूर्ण: आफु को लागि भिटामिन पूरक समावेश कस्मेटिक्स छनौट गर्दा किनभने धेरै भिटामिन लामो समयसम्म भण्डारण समयमा नष्ट गरिन्छ, "आफ्नो जीवन" धेरै ध्यान हुन छ। साथै, भिटामिन को एक उच्च एकाग्रता (सामान्यतया को ठूलो अंश तिनीहरूलाई, उत्पादन र वित्तीय विचार को विशेषताहरु आधारमा दायरा 0.5 देखि 3% गर्न) राम्रो महत्वपूर्ण एलर्जी हुन सक्छ भन्ने हाम्रो "dermatitno" राम्रो पटक - महत्वहीन छैन!
र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - सम्झना हेरचाह र भिटामिन लागि रकम बाहेक नियमित भोजन संग आफ्नो शरीर के गर्नुपर्छ भनेर! स्वस्थ, र यसैले, सुन्दर उपस्थिति आवश्यक भिटामिन ए, डी, कश्मीर, B2, B5, B6, सी, ई, एफ, क्यू, एफ र एच, तर विशेष कुरा भिटामिन ए, ई बाल र खोपडी, सी लागि B5 र एच
भिटामिन ए, वा retinol - छाला र कपाल सामान्य विकासको लागि अत्यावश्यक छ। यो झुर्रियाँ को गठन रोक्छ छाला प्रतिरक्षा, एक एंटीओक्सिडेंट सुधार, छाला पुनर्जनन प्रबर्धन गर्ने, keratin कक्षहरूको गठन normalizes। Retinol क्षतिग्रस्त बाल संरचना दुरुस्त, र यसको कमी बाल चम्कने को हानि र कपाल पनि हानि गर्न सक्छ। यो कपाल बलियो बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, भिटामिन ए यो लोच र चम्कने दिन्छ। अक्सर यो पातलो, बेजान बाल बाल हानि झुकाउ, साथै सुक्खा भंगुर बाल लागि लागि formulated छ।
seborrhea - एक कमी भिटामिन को वसामय ग्रंथिहरु को blockage हुन सक्छ, जो को नतिजा subtlety र बाल, सुनिंनु, मुखासे, वसामय cysts को fragility र दैवत्वारोपण रूपमा हुनेछ।
मा निहित: कलेजो (विशेष गरी माछा); घिउ, क्रीम र सारा दूध; अन्डा yolks मा; सुकेको खुबानी, गाजर, ब्ल्याकबेरी, करौदा, buckthorn, पहाड खरानी र अन्य, पहेलो सुन्तला र रातो तरकारी, साथै पत्तेदार साग: बोट खाद्य पदार्थ मा।
भिटामिन बी 1, वा thiamine - घाउ निको पार्नुहुन्छ र छाला र कपाल regenerates। मुखासे, dermatitis, कलेजो स्थलहरू, seborrhea व्यवहार गर्नुहुन्छ। भिटामिन बी 1 स्वस्थ बाल लागि आवश्यक छ, जो प्रोटिन संश्लेषण, संलग्न छ। बाल को गरिब वृद्धि मा Thiamine कमी परिणामहरू र आफ्नो जीवन स्वस्थ चमक गुमाउन।
मा निहित: अनाज विभिन्न अनाज (प्राथमिकताको अनुपचारित); रोटी गहुँको पीठो र राई देखि; बीउ।
भिटामिन बी2वा riboflavin - infrequently भिटामिन वृद्धि भनिन्छ छैन। यो कक्षहरू मा ऊर्जा उत्पादन बढावा। यो बाल हानि रोक्छ। मुखासे, seborrhea व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो बाल, स्वस्थ ताजा र सुन्दर राख्न मद्दत गर्छ। तपाईं कपाल जरा चाँडै चिल्लो लागेको भएका छन्, तर सुक्खा समाप्त, सम्भवत रहन भने, तपाईं बस यो भिटामिन हराइरहेका छन्। riboflavin लागि वयस्क दैनिक आवश्यकता 2mg छ, तर यो धेरै छिटो (बी भिटामिन बाँकी बीच भन्दा छिटो) खपत, त्यसैले भिटामिन बी2विशेष ध्यान।
दुग्ध उत्पादन, अन्डा, रोटी, बियर, मासु, र विशेष गरी अन्तस्करणले र जनावरहरूको कलेजो मा: मा निहित।
भिटामिन B5 वा डी-panthenol, pantothenic एसिड - moisturizes, soothes, जलन र खुजली relieves, बलियो विरोधी उमेर बढन र चौरसाई प्रभाव छ, दुरुस्त र छाला सुरक्षा, सुनिंनु कम गर्छ। राम्रो अन्य भिटामिन भन्दा कपाल द्वारा अवशोषित, र यसैले प्राय प्रयोग गरिन्छ। एक कंडीशनिंग प्रभाव छ, यो चिस्यान retaining मा, बाल fragility रोक्छ मद्दत गर्छ। केश बाम सूक्खापना relieves र पनि यो तल वजन बिना 10-15% द्वारा कपाल thicken सक्छ। पूर्ण र द्रुत क्षतिग्रस्त संरचना पनि सबै भन्दा क्षतिग्रस्त बाल पुनस्थापित। यो चमकदार र रेशमी बनाउने, केश सतह smoothes। एकदम अक्सर comb धेरै सजिलो छ र गर्मी उपचार को सबै प्रकार (हेयर ड्रायर, फलाम) मा बाल सुरक्षा किनभने, स्टाइल र हेरविचार मा संयोजन लाइन मा शुरू।
केश आपूर्ति मार्फत अक्सिजन बलियो, बाल follicles बलियो बनाउन Pantothenic एसिड क्षमता, व्यापक रूप कपाल र alopecia रोकथाम बलियो बनाउन प्रयोग मिडिया मा। बस भिटामिन B5 कपाल को रंग र चम्कने नियन्त्रण र अकाल बुढ्यौली रोक्छ जो melanin को उत्पादन, योगदान पुग्छ।
मा निहित: myasoe चिकन, कलेजो, चोकर, अन्डा yolks, बदाम, ब्रोकोली र brewer गरेको खमीर मा ठूलो संख्या मा (! त्यो दूर होइन प्राप्त धेरै पूर्ण)।
भिटामिन सी वा एस्कोर्बिकएसिड - मानव शरीर लागि महत्त्वपूर्ण भिटामिन को छ। यो pigmentation प्रक्रियाहरू संलग्न छ, विरोधी-भडकाऊ र antiallergic कार्य छ कोलैजेन संश्लेषण बढावा दिन र भास्कुलर permeability normalizes। मिडिया मा कम अक्सर बाल लागि प्रयोग, तर अक्सर बाल विकास, खोपडी normalizing छाला पुनर्जनन (छाला moisturizes), र विरोधी उमेर (विरोधी उमेर बढन) को लागि रेखा मा प्रोत्साहित गर्ने धन मा इंजेक्शन। संवेदनशील छाला (कम सुनिंनु) र सुक्खा कपाल (भिटामिन ई संयोजनमा) प्रतिस्थापन छैन।
जब भिटामिन सी कमी छाला सुक्खा र कुनै न कुनै, पहिले उमेर बढन बन्नेछ।
मा निहित: सिट्रस, kiwifruit, बन्दागोभी (विशेष गरी sauerkraut), कालो currant (र पात र जामुन), स्याउ (विशेष गरी हरियो मा), खुबानी, टमाटर (विशेष Bake), घण्टी खुर्सानी, स्ट्रबेरी, गुलाब र समुद्र buckthorn, आलु वर्दी (विशेष छाला मा), पुदीना, पुदिना, मेलिसा मा।
भिटामिन ई, वा tocopherol - अक्सर भनिन्छ "सौन्दर्य भिटामिन"। यो छाला बुढ्यौली ढिलो, धेरै बलियो र स्पष्ट एंटीओक्सिडेंट प्रभाव छ। भिटामिन ई को बढावा छाला श्वसन छाला कक्षहरूको झिल्ली बलियो; पनि जीवन "ताजा स्थिति कक्षहरू" reviving बाल follicles को संरचना, दुरुस्त राखेको छ। अक्सर अत्यधिक सक्रिय दबाइ शुरू बाल विकास, साथै alopecia को सबै प्रकार, androgenic सहित को रोकथाम बढावा। धेरै भिटामिन सी संग संयोजन प्रभावकारी
मा निहित: वनस्पति तेल बीउ (पोलेको छैन), मेवा, लगभग सबै फलियां, कलेजो, दूध, porridge, अन्डा।
पनि अक्सर प्रयोग अल्फा-tocopherol - (-, एंटीओक्सिडेंट यूवी रेज को हानिकारक असरहरू छाला सुरक्षा tocopheryl एसीटेट), tocopheryl linolet (tocopheryl linoleate - एक एंटीओक्सिडेंट), tocopheryl एसीटेट (अल्फा-tocopherol यूवी रेज को हानिकारक असरहरू छाला सुरक्षा)।
भिटामिन एच वा बायोटिन - बायोटिन सल्फर समावेश ताकि, यसलाई हुन सक्छ "भिटामिन सौन्दर्य छाला।" बोसो चयापचय, अर्थात् वसामय ग्रंथिहरु को गतिविधि regulates नियन्त्रण गर्छ। रंग, चम्कने र कपाल को बल दुरुस्त राखेको छ। सुनिंनु र itches कम गर्छ, यो जलन देखि छाला सुरक्षित राख्दछ। अक्सर उत्पादन, तेल संवेदनशील, inflamed र scaly शिरको लागि मा इंजेक्शन। साथै बलियो र कपाल पातलो, बेजान बाल विरुद्ध तयारी जस्तै। धेरै रासायनिक उपचार पछि कपाल र छाला हेरविचार (रंग, perming) र insolation मा राम्रो।
जब भिटामिन एच कमी गम्भीर seborrhoea, बाल हानि, प्रारम्भिक उपस्थिति graying सक्छ।
मा निहित: काउली, हरियो प्याज, जवान सिमी, हरियो मटर, आलु, खमीर, मशरूम, गाजर, टमाटर; पशु उत्पादन - दूध, अन्डा, कलेजो।
भिटामिन पीपी वा nicotinic एसिड amide - शरीर र खोपडी पछि देख लागि कस्मेटिक्स मा अत्यन्तै लोकप्रिय र फैशन धेरै अंश। यसको मुख्य कार्य यसको गुण सबै यो धेरै विशेष देखि व्युत्पन्न छन्, रगत धाराको उत्तेजना छ। निको घाउ र बल्न, सेलुलर श्वसन को प्रतिक्रिया मा, छ संलग्न pimples को, blackheads र छाला को सूक्खापना हटाउँदछ, छिटो बाल विकास केश follicles को राज्य normalizes, सम्पूर्ण लम्बाइ भन्दा केश nourishes, आफ्नो जरा मा चयापचय प्रक्रियाहरू बढावा, graying र बाल हानि रोक्छ। यो विरोधी-एलर्जी, विरोधी-भडकाऊ र antipruritic प्रभाव छ बुढ्यौली रोकन, छाला smoothes।
भिटामिन यू वा methylmethionine - सकारात्मक, कार्बोहाइड्रेट र बोसो को चयापचय असर दुखाइ र एलर्जी प्रतिक्रिया relieves, सेल पुनर्जनन को बढावा।
कस्मेटिक्स मा मइस्चराइजिंग सामाग्री
एक खोपडी को हेरविचार सहित कुनै पनि कस्मेटिक्स को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, को - प्रभावकारी मइस्चराइजिंग। "छाला hydration" को अवधारणा अस्पष्ट र बहुमुखी छ। किन चिस्यान को समस्या तरिका र, त्यसैले, विभिन्न लागूऔषधको एक किसिम समाधान गर्न आवश्यक छ भन्ने छ।
बाल मइस्चराइजिंग सामाग्री को लागि आधुनिक कस्मेटिक्स चार समूह विभाजन गर्न सकिन्छ: humectants; जलरागी एजेन्ट; hydrophobic सामाग्री
Humectants - हावा बाट चिस्यान अवशोषित। कस्मेटिक उत्पादनहरु को संरचना छाला सतह देखि चिस्यान वाष्पीकरण को दर slows र stratum corneum को "soaking" प्रदान गर्नुहोस्।
Glycerol (1,2,3-propanetriol) - तीन परमाणु रक्सी, चाँडै एजेन्ट मृदुकरण एक छाला जस्तै कस्मेटिक उत्पादनहरु को एक विशाल संख्या को भाग रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो ठण्डा जलवायु। के महत्त्वपूर्ण छ Glycerol को क्रीम को चिसो वा एक चिसो दिन अनुहार मा कुनै पनि अन्य उत्पादन रोकन, तरल को चिसो बिन्दु कम छ। यसलाई आफ्नो वजन 40% नातेदार गर्न हावा पानी अवशोषित गर्न सक्छन् भन्ने अनुपम। यसले एक छाला मइस्चराइजर (माहौल देखि चिस्यान आकर्षित) नम हावा जस्तै संचालित भन्ने हो। को Glycerol अणु को सानो आकार सजिलै पर्याप्त गहिरो साँच्चै "गहिरो" र "दीर्घकालीन" hydration को लागि यसरी प्रदान, छाला को गहिरो तहहरूमा भित्र पस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यो एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने प्रभाव छ र छाला र कपाल मा कस्मेटिक्स एक राम्रो वितरण गर्न योगदान पुग्छ। लगभग सबै कपाल balsams शुरू।
Propylene glycol (1,2-propanediol) - दुई परमाणु रक्सी अक्सर यो एक विलायक रूपमा प्रयोग भएको छ जो (भिटामिन, रंग, बोट अर्क को लागि, हवाई तेल) कस्मेटिक योगों मा (पानी प्रतिस्थापन)। सूथिंग
बाल विकास लागि एजेन्ट: समीक्षा, सुझावहरु घरेलू समकक्षों जब छनौट
केश गोलो अनुहार लागि उपयुक्त छ जो छनौट
उनको टाउको मा एक मात्रा र स्टाइलिश रोटी कसरी बनाउने
लम्बाइ haircuts bangs संग र यो बिना bob
बाल हटाउनका लागि स्ट्रिप्स - छाला चिल्लो बनाउन एक विश्वसनीय तरिका
Staining shatush - गर्मी कपाल
Begonia tuber कसरी बढ्न र मात्र
Pistols अलार्म सांसद-371 - अवलोकन
हेडफोन यामाहा एफि-100: एक सिंहावलोकन, वर्णन, सुविधाहरू, र मालिकको समीक्षा
महिलाहरु को लागि बातचीत गर्न को लागि यो अधिक मुश्किल छ?
अपार्टमेन्टमा मथ कसरी व्यवहार गर्ने: प्रभावकारी तरिकाहरू, लोक उपचार, सिफारिसहरू र प्रतिक्रिया
वर्ग "लक्जरी" यात्रा: एक कोठा "सुइट" र सबै यसको बारेमा
यस ल्यापटपमा Zalipla कुञ्जी: के? समस्या कसरी समाधान गर्ने?
के खेल सुदूर रो Primal सञ्चालन गर्न आवश्यक छ? सिस्टम आवश्यकताहरु र जारी मिति
Downers र व्याख्या - तपाईं एक हिउँ थियो भने यो के मतलब।